Iran oo ku eedeesay reer galbeedka in ay la shaqeeyaan waxa loo yaqaan argagaxiso – SBC
Iran oo ku eedeesay reer galbeedka in ay la shaqeeyaan waxa loo yaqaan argagaxiso
Posted by editor on June 26, 2011 Comments
Tehran:- waxaa maalintii shaley ka furmay magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran shirweyne ay martigelisay dowladda Iran oo looga hadlayey la dagaalanka waxa reer galbeedku u yaqaanaan argagaxisada.
Madaxweynaha Iran Maxamuud Axmedi Najaad oo shirka daah furay ayaa sheegay in dowladaha mareykanka iyo Israel iyo midowga Yurub ay yihiin argagaxisada ugu weyn caalamka.
Shirkan oo ay ka soo qeyb galeen madaxda dalalka Afghanistan , Pakistan iyo ciraaq ayaa waxa la isku weydaarsaday aragtida waxa reer galbeedka u yaqaanaan argagaxisada.
Madaxweyne Najaad ayaa isweydiiyey sababta ay reer galbeedku ugu tilmaamayaan kooxaha sida Xamaas iyo xisbullah in ay yihiin argagaxiso halka Israel ay go’doon ku hayso 2 malyan oo rayid filistiiniyiin ah oo ku nool marinka Gaza, islamrkaana Israel uu mareykanku ku tilmaamo in ay tahay mid xaq u leh in ay is daafacdo.
Sidoo kale Najaad waxa uu sheegay in weerarada ay ka fulinayaan diyaaradaha aanay cidna wadin dalalka Afghanistan iyo Pakistan oo lagu leenayo dad rayid ah iyo dilka saynisyahanada Iiraaniyiinta oo aysan cidna sheeganayn mas’uuliyadeeda in ay kamid tahay falalka argagaxisnimo ee mareykanku fulinayo, waa suu hadalka u yiriyee.
Xukuumadda mareykanka ayaa sameesay olole dublumaasiyadeed oo cunaqabtayn lagu saarayo Iran taasi oo la’ aamisan yahay in ay dadaal ugu jirto soo saaridda hubka sida aadka ah wax u burburiya ee nuclear-ka , balse Iran ayaa beenisay tuhunka reer galbeedka in ay doonayso hanashada hubka nuclear-ka.
Sidoo kale waxaa shirka ka hadlay madaxda dalalka Pakistan , Afghanistan iyo Ciraaq waxayna sheegeen in dalalkooda dagaal kulajiraan argagaxiso khatar ku ah dalalkooda iyo gobolka oo dhan.
Madaxweynaha Ciraaq Jalaal Daalabaani ayaa ka codsaday dalalka shisheeye in aysan taageero u fidin kooxaha sida Al-qaacida oo kale, waa suu hadalka u yiriyee.